Sukuzikhathaza Ngento KaStevie Wonder - Izinto Zobugcisa
Sukuzikhathaza Ngento KaStevie Wonder
Kule mphefumlo waseLatin ubethayo, uStevie Wonder ukhuthaza inenekazi lakhe ukuba lingoyiki ekuphononongeni bonke ubomi obuzisayo kuba uya kuhlala ecaleni kwakhe. Nangona esithi uthetha iSpanish kakuhle kwisingeniso, esithi 'Todo está bien chévere' ('Yonke into intle kakhulu' okanye 'Yonke into ipholile'), uWonder wayengalazi ulwimi.
Uxelele i-NPR: 'Ndihlala ndingumthandi womculo. Kwaye into ethi 'Ungakhathazeki' Yinto, 'xa ndenza idemo, bendithetha nje izinto ezithile. Uyazi, andizange ndithethe iSpanish. Kodwa ke, ndiyacinga, yinxalenye yovuyo olupheleleyo lwam lokukhuliswa eMidwest. Unezikhululo zikanomathotholo onokuthi mhlawumbi ube neeyure ezimbalwa zomculo waseSpain. Unomculo waseNtaliyane. Unomculo weendaba ezilungileyo. Unayo i-jazz. Unazo zonke iintlobo zomculo. Ngoku, uva ezinye izikhululo zaseArabhu. Uva zonke iindlela ezahlukeneyo zokubonisa. Kwaye ke, khange ndiyicinge into yokuba ndingaya kwezi ndawo, kodwa ndiya kudumisa uThixo ndikwazi uku-ndikwazi ukuya kwiindawo ezininzi. Kwaye ke bendiyigculela uhlobo lwesandi sayo. '
Ingoma yaseSpain yaphefumlelwa ngumfazi wasePuerto Rican owadibana noWonder kwivenkile erekhodayo. Ukhumbule: 'Ndiyabukhumbula ubusuku endiza kuyenza le ngoma. Kwaye kwenzeka nje ukudibana nale ntombazana egama linguMvula. Kwaye wayemhle. Kwaye wayesebenza kule venkile irekhodi - le venkile. Kwaye ndifana nokuthi kuye, hey, uyazi, kuyamangalisa. Uyazi, uyacula. Uyazi, uyiPuerto Rican. Ndithi, ewe, kulungile, uyazi, ndenza into encinci kwaye ndiyayithanda into encinci ebizwa ngokuba 'Ungakhathazeki' Bout A Thing. ' Ndingathini - ndithetha ukuba, ndinike into, into. Ndizokuvumela ukuba uze estudiyo ukuba unento ofuna ukuyithetha. Ndiza kuthetha ezinye izinto, kwaye iya kuba lusuku oluhle. Kwaye wathi, 'Ndiyakwenza oku kulungileyo.' Kwaye yindlela endiyifumene ngayo kwingoma. Kwaye, uyazi, sathandana, kwaye yayiyinto entle. '
Le yayiyi- # 2 yokubetha kwitshathi yeR & B.
IBritish acid jazz band Incognito yayine # 19 e-UK xa begquma oku ngo1992. Abanye amagcisa baye bayigubungela, kubandakanya i-Main Ingredient, isaxophonist uHank Crawford, uWeldon Irvine, uAl Jarreau, noJohn Legend. UTori Kelly wayirekhoda ngo-2016 kumdlalo bhanyabhanya oopopayi Cula .
Ngobusuku ngaphambi kokuba uDonald Trump anyulwe abe nguMongameli wase-US ngo-2016, kwavela uWonder Umdlalo wokugqibela kunye noStephen Colbert kwaye wabonisa indelelo yakhe ngeTrump. UColbert ucele imvumi ukuba yenze le ngoma ukunciphisa uloyiko lwabavoti benkululeko.
Ukuguqulelwa kukaJohn Legend kwaboniswa kumdlalo weqonga ka-2005 Bopha , eneenkwenkwezi uWill Smith, ngelixa i-Wonder yasekuqaleni yayisetyenziswa kwiifilimu Indoda Engcwele (1998), Ukukhupha Abafileyo (1999), Wamkelekile Ekhaya Roscoe Jenkins (2008), kunye Umgca oshayinayo wencwadi yokudlala (2012); yayisetyenziswa nakwimidlalo yeTV Ihlazo Kwisiqendu se-2016 'Thwack!'
soloko ifana yintloni nje
oh ndingumvukeli ngenxa yokukhaba
Qiniseka ukuba unxiba iintyatyambo kwizinwele zakho
lyrics ukubulala egameni lika
yiza uzive iingoma zomsindo